Ulusu olomileyo: yintoni, uyikhathalela njani nangaphezulu! | Amadoda aQinisekileyo
Ukuba nolusu olomileyo kwaye ujongeke ungenasiphako kunokwenzeka ngokugqibeleleyo. Kufuneka unikezele ngononophelo oluyimfuneko.
Fumanisa ukuba ungayichonga njani kwaye uluhlobo luni lococeko oludingayo, Kunye nokutya okungangabikho ekudleni kwakho:
1 Ukwazi njani ukuba unolusu olomileyo
2 Ungayinyamekela njani isikhumba esomileyo
2.1 Ulusu olomileyo neendevu
2.2 Uhlamba njani ubuso bakho
2.3 Indlela yokuhambisa amanzi ebusweni
2.3.2 I-Serum + Cream yokuThambisa
2.3.3 Ioyile yobuso
3 Yintoni oza kuyitya ukulwa ulusu olomileyo
Ukwazi njani ukuba unolusu olomileyo
Ukuba nesikhumba esomileyo kuqheleke kakhulu. Ukongeza, inika uthotho lweempawu ezenza ukuba kube lula ukufumanisa njalo. Ukuba ulusu lwakho luqinile kwaye lubuthathaka, Olu mhlawumbi lolusu lwakho. Ikwayathanda ukurhabaxa kunye nokucaphuka, iingxaki ezigxininiswa kukucheba.
Ungayinyamekela njani isikhumba esomileyo
Ngolusu olomileyo, kunye nazo zonke iintlobo zolusu, Kuyimfuneko ukuba inkqubo yezempilo yenziwe rhoqo kwaye ibandakanya iimveliso ezifanelekileyo. Ngaphandle koko ayisebenzi kangako.
Ulusu olomileyo neendevu
Nokuba ungazikhetha njani iinwele zobuso (ishevu esondeleyo, iindiza zeentsuku ezintathu, okanye iindevu ezinde), ukuxothwa linyathelo eliphambili kwinkqubo yezempilo xa unesikhumba esomileyo.
Iimveliso zokukhupha zisusa umaleko omncinci wolusu, thambisa iifollic kwaye ukhuphe iinwele kulusu. Ngale ndlela, enye yezona ziphumo zibi zempilo yococeko lwamadoda ngokubanzi (ukuba ayisiyiyo eyona imbi kakhulu) iyathintelwa: iinwele ezingenayo.
Unokuzikhupha iindevu zakho amaxesha ambalwa ngeveki, kodwa zama ukungachetywa kwangaphambili. Ukubeka ulusu kwezi nkqubo zimbini ngaxeshanye kunokubangela ukucaphuka ngakumbi kunokuba kufanelekile. Isantya esifanelekileyo sihlukile kwimeko nganye, nangona kunjalo kabini ngeveki inika iziphumo ezilungileyo kwiimeko ezininzi.
Into ebaluleke kakhulu xa kuziwa ekukhutsheni isikhumba esomileyo kukugxila ekuthinteleni ubomvu kunye nokucaphuka. Ukuyifumana khumbula ukuba ungayisebenzisi into exfoliator enobundlongondlongo kakhulu kulusu lwakho okanye uhlikihle ngamandla ngaphezu kwemfuneko.
Uhlamba njani ubuso bakho
Ukuba unesikhumba esomileyo Kulungile ukuba uhlambe ubuso bakho ngamanzi ashushu ngaphakathi beka amanzi ashushu okanye abandayo. Amaqondo obushushu agqithisileyo anokuqhubela phambili ukungabikho kwe-hydration, ebusweni nakwezinye iindawo emzimbeni. Akukwacetyiswa ukuba utshintshe ubushushu bamanzi ngexesha lenkqubo. Yintsomi ukuba iyingenelo kwii-pores. Inokwaphula imithambo yegazi.
Ngaba uyayisebenzisa into yokucoca ubuso? Kwimeko apho, qiniseka ukuba awuziva urhawuzelele kwaye uqinile emva kokuhlamba ubuso bakho ngayo. Ukuba ezi ziphumo bezingalindelekanga zenzeka, kunokwenzeka ukuba awusebenzisi isicoci esifanelekileyo kulusu lwakho. Kukho inani lezithako ezilahlekisayo kwizicoci zobuso ezininzi ezinokuphetshwa xa unengxaki yolusu olomileyo, njenge-zinc sulfate okanye i-salicylic acid.
Amanzi eMicellar, ukucoca cream okanye amagwebu okucoca ... nokuba yeyiphi na ifomathi oyikhethayo, into ebalulekileyo kukuba ayibangeli kukucaphuka. Jonga umthengisi kwimeko yokuthandabuza. Uyazi ukuba ufumene isicoci esifanelekileyo kuba ulusu lwakho luya kuhlala lutsha kwaye lithambile emva kokuyisebenzisa.
Indlela yokuhambisa amanzi ebusweni
Kuba ulusu olomileyo lufuna ukufuma okuninzi (kwaye luyakwazi ukuyiphatha ngaphandle kweengxaki), yenza kube nzima kubomvu kunye nokucaphuka ngokubheja isicoci somanyaniso esibonelela ngeyona hydration inzulu.
Okwangoku, Uninzi lweekhrim sele lubandakanya i-sunscreen, kodwa akukaze kube buhlungu ukuqinisekisa. Olu phawu lucutha kakhulu ukucaphuka okubangelwa kukonakaliswa lilanga.
I-Serum + Cream yokuThambisa
Cinga ngokudibanisa i-moisturizer yakho kunye ne-serum. Umsebenzi wangaphambili kumaleko angaphandle kwesikhumba (asabalulekileyo), ngelixa iiserum zinokungena ngokunzulu ngakumbi ngenxa yolwakhiwo oluncinci lweemolekyuli. Isiphumo si-hydration esipheleleyo.
Ulusu oluhlala lumeza lunokuxhamla kakhulu kwizibonelelo zeoyile yobuso. Iioyile zobuso ezilungileyo azibangeli bumnyama; kwaye zibandakanya iivithamini, ii-antioxidants, kunye nee-acid ezifanelekileyo kwiifomula zazo. Ukwengeza, ukubambisa amanzi eluswini ukomeleza isithintelo sayo sokukhusela.
Yintoni oza kuyitya ukulwa ulusu olomileyo
Los I-Omega-3 fatty acids (ityhuna, isalmon, imbewu yeflakisi, i-walnuts ...) zinceda iiseli ukuba ziqulathe amanzi amaninzi. Kwaye ulusu olomileyo lufuna amanzi amaninzi kangangoko ukuze lubonakale luthambile kwakhona.
Yitya iziqwenga ezimbalwa mihla le Kuqwalaselwa njengenye yezona zonyango zonyango ezomileyo ngaphandle. Kwaye banikezela ngama-antioxidants, iivithamini kunye namanzi ukuze uhlale uphilile kwaye uhlaziyekile.
Ngakolunye uhlangothi, ifayibha kunye nohlaza olunamagqabi kuya kukunceda ukukhusela kwiihormones zoxinzelelo nakwimeko ezithile zokusingqongileyo, ezinokwenza ulusu lwakho lubonakale lome nangakumbi. Imfihlo ikwii-phytochemicals zayo ezibalulekileyo, ezisebenza ngokuchasene neeradicals simahla emzimbeni. Ixabiso leentsuku zonke lefayibha yamadoda ngama-38 eegram. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukusebenzisa kakhulu kunokuthintela inkqubo yokubuyisela kwakhona ulusu, yiyo loo nto kucetyiswa ukuba ungagqithi kule mali xa unesikhumba esomileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ulusu olomileyo